Guudmarka Uurka ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Guudmarka Uurka ee Columbus, OH
Waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo waxtar leh oo ku saabsan uurkaaga boggayaga internetka. Waad ka heli kartaa mowduuc kasta (oo loo qaabeeyey sida xarfaha isugu xiga) menu-ka hoos u dhaca, ama waxaad ka baari kartaa kooxaha mawduucyada hoose.
Isbedelada jirkaaga iyo koritaanka ilmahaaga
Baro waxa ka dhici doona ballamahaaga uurka ka hor iyo imtixaannada la qaadi doono. Baro jadwalka koritaanka ilmahaaga iyo isbeddelada la socda ee jirkaaga.
Dhibaatooyinka Caadiga ah ee Uurka
Baro waxa ay yihiin dhibaatooyinka caadiga ah ee lagala kulmo uurka iyo sida loola macaamilo. Baro goorta lala xiriirayo bixiyahaaga.
Waxyaabaha keena Dhabar xanuunka xiliga uurka
Ka Hortagga Dhabar xanuunka
Nafaqo habboon iyo jimicsi inta lagu jiro Uurka
Baro cuntooyinka muhiimka u ah horumarka ilmahaaga iyo caafimaadkaaga wanaagsan. Baro tilmaamaha jimicsiga iyo badbaadada inta aad uurka leedahay.
Nafaqada iyo Miisaanka
Qaadashada Kaalshiyamka inta aad uurka leedahay
Isbedelada Hawlahaaga Inta Uurka Leedahay
Baro waxa nabdoon iyo waxa aan ahayn iyo sida wax looga beddelo howlahaaga hadda jira, laga bilaabo safarka ilaa beerta illaa cuntada la qabanayo, si loo hubiyo caafimaadka ugu fiican adiga iyo ilmahaaga.
Isticmaalka khamriga inta aad uurka leedahay
Toxoplasmosis, Diyaargarowga Cunnada iyo Khataraha Deegaanka
U Diyaar Garowga Imaatinka Cusub
Baro xulashooyinkaaga foosha iyo foosha. Baro sida loola socdo dhaqdhaqaaqa ilmahaaga toddobaadyada ugu dambeeya uurka.
Bangiga Dhiigga ee Cord
Foosha iyo gaarsiinta
Gudbinta Dhakhtarka Caruurta
Macluumaadka ku yaal farahaaga
Fiiri liistada kooban ee mowduucyada ugu caamsan ee la xiriira uurka oo soo dejiso Buugga Uurka ee PWHealth.
Buug-yaraha uurka (pdf daabacaad saaxiibtinimo leh)
Uurka Su'aalaha la Weydiiyo (boggayaga internetka)
Uurka Su'aalaha la Isweydiiyo (pdf daabacaha-saaxiibtinimada leh)
Caadi ahaan, bukaannada caafimaadka qaba waxaa badanaa la arkaa afartii ilaa shantii toddobaadba mar inta lagu jiro 28-ka toddobaad ee uurka ugu horreeya. Laga bilaabo 28 illaa 36 toddobaad, ballamahaaga waxaa la qorsheeyay laba ama saddexdii toddobaadba. 36 toddobaad kadib ilaa dhalmada, waxaa lagu arkaa toddobaadle.
Bukaannada qaba dhibaatooyinka uurka ee caafimaadka waxaa laga yaabaa inay u baahdaan in la arko had iyo jeer labadii toddobaadba mar inta lagu jiro uurka hore iyo hal ama laba jeer usbuucii inta lagu jiro qaybta dambe ee uurka.
Haddii aad ballan sameysid kahor 10 usbuuc uurka, waxaad la kulmeysaa kalkaaliye caafimaad. Waxay ku siineysaa macluumaad ku saabsan uurkaaga waxayna ka jawaabeysaa su'aalahaaga. Tusaale ahaan, waxay ka hadlaysaa calaamadaha caadiga ah ee uurka iyo siyaabaha loo yareeyo dhibka. Waxa kale oo laguu soo qoraa fiitamiinada uurka.
Intaas waxaa sii dheer, shaqadaada shaybaarka dhalmada ka hor ayaa la qabtay. Tan waxaa ka mid ah shaqada dhiigga, dhaqanka kaadida, baaritaanka maqaarka iyo dhaqamada jabtada iyo kalamiidiya. Shaqada dhiigga dhalmada ka hor waxaa ka mid ah:
Nooca dhiigga / Rh Factor
Tirinta Dhiigga oo Dhameystiran (CBC)
Tijaabada waraabowga (gobolka ayaa loo baahan yahay)
Shaashadda Sickle cell (loogu talagalay macaamiisha Afrikaanka Ameerika)
Waqtigaan, iyo sidoo kale booqasho kasta, daryeelkaaga waxaa ka mid ah:
Xisaabinta da'da uurka ilmaha.
Qiimaynta ilma-galeenka iyo cabirka dhererka maaliyadeed.
Baadhitaanka cadaadiska dhiigga.
Baadhitaanka kaadi ee borotiinka iyo ketones haddii caafimaad ahaan loo baahdo.
Codadka Wadnaha Uur-ku-jirta (Ma maqli karo Doppler illaa 10 illaa 12 toddobaad oo uur ah).
Qiyaastii 10 usbuuc oo uur ah, waxaad u laabanaysaa in natiijooyinka shaybaarkaaga dib loo eego, samee baaritaanka jirka iyo ultrasound miskaha si loo xaqiijiyo taariikhdaada dhalmada.
Warbixin Ku Saabsan Bangiga Dhiigga ee Dhiigga
Dhiigga xididku waa dhiigga ku hadha xudunta kadib marka ilmahaaga la dhalo oo xadhigana la jaro.